10 qodob oo go’aamin karta in Real Madrid ay La Liga ku guuleysato ama inay hanan wayso – Gool FM
10 qodob oo go’aamin karta in Real Madrid ay La Liga ku guuleysato ama inay hanan wayso
(Madrid) 14 Juun 2020. Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa caawa xilliga geeska Afrika 8:30pm la ciyaari doonto kooxda Eibar kulan ay dib ugu soo laabaneyso ciyaaraha La Liga, xilli ay maanka ku heyso inay labo dhibcood u jirsato kooxda Barcelona oo xalay guul ka qaadatay Real Mallorca.
Booqashada Los Blacos ay u safreyso kooxda Eibar ayaa billaw u ah 11 kulan oo kaga harsan ciyaaraha horyaalka, waxaana xusid mudan in kulammadaas ay ku ciyaari doonto muddo shan toddobaad ah.
Haddaba qoraalkan waxaad kaga bogan kartaa 10 qodob oo go’aamin kara inay Real Madrid hannan karto La Liga ama inay ku hungoobaan.
1- Inay illoowaan qaladaadkii waaweynaa ee horraantii xilli ciyaareedkan
Real Madrid ayaa kaliya guuleysatay hal kulan afartii kulan ee ugu dambeysay oo ay La Liga ka ciyaartay, waana guushii ay ka qaadatay Barcelona.
Waxay lumisay siddeed dhibcood ku lumisay kooxo ay ahayd inay garaacaan, maadaama laba bareejo ay la gashay Real Valladolid iyo Real Betis, halka guuldarro lama filaan ah ay ka qaadatay kooxda Real Mallorca.
2- Inay ku awood badan tahay gurigeed
Waxaa suuro gal ah inay inta ka dhimman xilli ciyaareedkaan ku sii ciyaarto Estadio Alfredo Di Stefano maadaama uu dib u dhis ku socdo garoonka Santiago Bernabeu, balse waa inay awood dheeri ah ku muujisaa garoonkeeda.
Los Blancos ayaa wali guul darro la’aan ah kulammada xilli ciyaareedkan ay garoonkeeda ku ciyaartay ee ka tirsan La Liga, balse waxay barbarro kula gashay Valladolid, Betis, Athletic Club iyo Celta Vigo, iyadoo ay xusid mudan tahay inay dhammaan kooxaha waaweyn ku garaacday garoonkeeda marka laga reebo Valencia oo soo booqan doonta kulanka ka dhici doona gegada ku meel gaarka ah ee Di Stefano.
3- Isku jaangoynta difaaca bidix
Zinedine Zidane ayaa u muuqday mid inta badan door bidayay Marcelo marka loo fiiriyo Ferland Mendy ka hor inta aysan kubadda cagta hakadka galin.
Macallinka Real Madrid waa inuu kala doortaa duullaan wadaha reer Brazil iyo xiddiga difaacashada wanaagsan ee Ferland Mendy.
4- Feejignaanta daqiiqadaha ugu horreeya ciyaarta
“In jawi taageere la’aan la ciyaaro waa wax aanan annaga garanayn, qofkii si fiican ula qabsada ayaana guuleysanaya” ayuu yiri Toni Kroos mar uu ka hadlayay ku ciyaarista garoon faaruq ah.
Los Blancos ayaa sagaal kulan oo kala duwan xilli ciyaareedkan gool lagu hoggaamiyay bilawga ciyaarta, sidaas darteed, waxaa inay feejignaan badan sameeyaan xiddiga Real Madrid.
5- Bale iyo in jawiga taageere la’aanta ah uu u roon yahay
Waxaa suuro gal ah in Gareth Bale uu qaab ciyaareed qurux badan ku helo la’aanta jamaahiirta kooxda ka dhisan caasimadda Spain.
Laacibka reer Wales ayaanan garoonka kooxdiisa wax gool ah aanan ku dhalinin 449 maalmood, waxaase uu heystaa fursad uu abaartaas ku soo af jari karo maadaama uusan la kulmeyn cadaadiskii kaga imaan jiray taageerayaasha.
6- La qabsashada Zidane ee baddeladda la kordhiyay
Tan iyo bilawgii xilli ciyaareedkan, Zidane waa tababaraha isticmaalay badellada ugu yar ee La Liga, isagoo baddel sameeyay kaliya 76 jeer.
Kaddib hakadkii dheerraa awgii, kooxaha kubadda cagta waxaa loo ogolaaday inay isticmaali karaan shan baddel kulankiiba, waxaana taas ay qasbi kartaa in macallinka Faransiiska ah uu wax ka baddelo xisaabtiisa badellada.
Vinicius Junior iyo Luka Jovic oo uu min 11 jeer baddelay ayaa ah xiddigaha ugu badan ee uu baddelay, waxaa la simman Isco, halka Karim Benzema sagaal jeer uu ciyaarta ka saaray.
7- Qorsheynta safka tirada badan
Waxaa hubanti ah in halista dhaawacyada ay kordheyso marka si is daba joog ah loo ciyaaro, waxaana taas ay horseedi kartaa in xiddigo aanan markii hore la isticmaali jirin ay fursad u helaan inay daqiiqado badan ciyaaraan.
Ciyaartoyda Zidane ka sugi doonta isticmaalka badan waxaa ka mid ah Eder Militao, Jovic, Mariano Diaz, James Rodriguez, Nacho iyo Brahim Diaz.
8- Saddex geesoodkii riyada
Maadaama Marco Asensio iyo Eden Hazard ay taam u yihiin, Zidane ayaa weerarka keensan kara weerar saddex afle ah oo uu ku taammay bilawgii xagaagii hore.
Labada laacib ee dhaawacyada ka soo kabsaday ayaa weerarka lammaane kula noqon kara Karim Benzema, inkastoo aanan la dhayalsan karin shaqada Vinicius Jr.
9- Nasiinnada Casemiro
Hakadkii ku yimid xilli ciyaareedkan ayaa waqti badan Casemiro u siiyay inuu nasiyo jirkiisa.
Laacibka reer Brazil ayaa xilli ciyaareedkan garoonka ku jiray wadar ahaan 2,220 isagoo ku soo billawday 25 kulan oo La Liga ah, waxaana la simman kaliya Sergio Rams iyo Benzema.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira wali qatar kale oo uu ku sii maqnaan karo, balse waa haddii uu jaalle qaato inuu maqnaan doono kulan ganaax ah.
10- Inay adkeyso weerarkeeda
Goolhaye Thibaut Courtois ayaa laga dhaliyay kaliya 19 gool xilli ciyaareedkan, waana goolhayaha ugu wanaagsan La Liga xilli ciyaareedkan, sidoo kalena waxa uu 12 gool ka yar yahay goolhayaha Barcelona Marc-Andre Ter Stegen marka la xisaabiyo goolasha shabaqooda la dhex cuskiyay.
Balse Real Madrid waxay dhalisay 49 gool, halka Barca ay dhalisay 63 gool, sidaas darteed, waxay diiradda saareysaa kooxda Madrid ka dhisan inay xoojiso weerarkeeda oo ay goolal badan dhaliso.
Waxaa afar gool u soo jira Real Sociedad, halka Villarreal ay shan gool ka yar tahay kooxda Macallin Zidane marka la eego kala sarranta dhanka gool dhalinta kooxaha La Liga xilli ciyaareedkan.
Arsenal iyo Chelsea oo ku tartamaya saxiixa goolhaye ay leedahay Koox ka ciyaarta horyaalka Premier League
Agaasimaha PSG ee Leonardo oo ka war bixiyay mustaqbalka Neymar Jr iyo Kylian Mbappe... (Miyuu ku kalsoon yahay inay sii heysan karaan?)